गोप्य कोठामा दुईघण्टा गलफत्तीः ओली- म उठेर जान्छु, प्रचण्ड- हिँड्ने भए हिँडौं ! – Naulo Khabar
९ वैशाख, काठमाडौं । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हत्पती गल्ने नेता होइनन् । आइतबार राष्ट्रियसभागृहमा ब्यानर प्रकरणको लफडा हल गर्न बसेको दुई पार्टीको बैठकमा पनि ओली कडै रुपमा प्रस्तुत भए । उनले पुरानै ब्यानरमा कार्यक्रम नगरिए आफू उठेर हिँड्ने माओवादी नेतालाई धम्की दिए ।
कार्यक्रम कतिबेला सुरु होला भनेर हलमा कार्यकर्ताले व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेकै बेला सभागृहको एउटा कोठामा दुई दलका शीर्षनेताहरु बाझाबाझ गरिरहेका थिए । त्यहाँ दुई घण्टासम्म प्रचण्ड र ओलीवीच गलफत्ती पर्‍यो । केपी ओलीले म उठेर जान्छुभन्दा प्रचण्डले गए हुन्छ भन्ने जवाफ फर्काए ।
दिउँसो १२ बजे गर्ने भनिएको संयुक्त कार्यक्रम ४ घण्टापछिमात्रै गरिएको थियो । यति लामो समय ओली र प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरु गोप्य कोठामा के गरेर बसे ? अनलाइनखबरले रहस्य फेला पारेको छ ।
ओली गलाउन खोज्ने, प्रचण्ड नगल्ने
कार्यक्रमस्थलमा टाँगिएको बोर्ड माओवादी कार्यकर्ताको विरोधका कारण झिकिएपछि कार्यक्रमस्थलकै एउटा कोठामा एकता संयोजन समितिको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ झण्डै २ घन्टा गलफत्ती भयो । बाहिर कार्यकर्ताहरु छिटो कार्यक्रम सुरु गर भन्दै होहल्ला गरिरहेका थिए, भित्र नेताहरु आपसमा बाझिरहेका थिए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुरानै ब्यानरमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने अडान राखे । त्यो नभए कार्यक्रम नै नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले धम्की दिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पुरानै ब्यानर राख्ने हो भने संयुक्त कार्यक्रम नै नगर्ने अड्डी कसे ।
बैठकका क्रममा पटक-पटक ओलीले ‘म उठेर जान्छु, अब कार्यक्रम हुँदैन’ भनेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ‘हिड्ने भए हिँडौं भन्दै ओलीको प्रतिवाद गरे ।
‘हतारमा कार्यक्रम गर्दा प्रविधिक त्रुटी हुनु अन्यथा होइन तर, गल्ती भएको थाहा भएपछि सच्याउन जसरी आनाकानी गरियो, त्यो गम्भीर छ’ माओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरलाई सुनाए, ‘अब स्ट्याण्ड नलिने हो भने हुन्न भनेर हामी पनि अडि्डयौं ।’
अर्को संयुक्त ब्यानर बनाएर कार्यक्रम गर्ने कुरा हुँदा पनि ओली अडि्कएका थिए । नयाँ ब्यानर बनाउन कति समय लाग्छ, बुझौं भन्दा पनि उहाँले मैले ब्यानर बनाउने होइन, कार्यक्रम भए यसमै हुन्छ, नभए हुन्न भनेर माओवादी नेताहरुलाई झाँटेको स्रोतले बतायो ।
दुई घन्टासम्म छलफल गर्दा पनि माओवादी नेताहरु नगलेपछि दुई बेग्लाबेग्लै ब्यानरमा कार्यक्रम गर्ने सहमति भयो । पहिले बनाइएको ब्यानर एमाले कार्यकर्ताले टाँगे भने माओवादीले अर्को ब्यानर टाँग्यो ।
र, ४ बजेदेखि कार्यक्रम सुरु भयो ।
‘एकता’को साटो ‘समानता’ को सन्देश !
पार्टी एकताको ‘संघार’मा पुगेका दुई कम्युनिष्ट घटक एमाले र माओवादीले ‘एकताको सन्देश दिन’ भन्दै राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रमले सन्देश पनि दियो । तर, नेताहरुले भनेको जस्तो छिट्टै एकता भइहाल्छ भन्ने होइन कि सम्मानजनक एकता हुन्नुपर्छ भन्ने सन्देश गयो ।
माओवादीले सम्मानजक एकताभन्दा एमालेले ‘प्रचण्डलाई महाधिवेशनपछि अध्यक्ष हुने लेखेर दिन सकिन्न’ भनेको थियो । तर, कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीले प्रचण्डको पदको सुरक्षा मात्र होइन, साँचो अर्थमा सम्माजनक एकता खोजेको सन्देश दिएको छ ।